Somaliland oo sheegtay inay xireyso xuduudaheeda
War ay maanta soo saareen guddida Somaliland u qaabilsan u diyaargarowga iyo ka hortaga xanuunka Coronavirus ayay ku shaaciyeen go’aano ka kooban lix qodob, iyagoo bulshada reer Somaliland ku adkeeyey inay ka taxadaraan xanuunkan islamarkaana ay raacaan fariimaha la bixinayo.
Guddida sidoo kale sheegay inay go’aamiyeen in la xidhayo dhamaan xadka dhulka ah ee ay la wadaagaan, sida ay sheegeen Ethiopia, Soomaaliya iyo Djibouti laga bilaabo 26-ka bishan March 6-da fiidnmino, islamarkaana kaliya ay gudbi karaan waxyaabaha daruuriga ah ee ay ka mid yihiin raashinka, shidaalka, daawooyinka, agabka caafimaadka iyo badeecadaha ganacsiga.
Waxay intaasi sii raaciyeen in sidoo kale ay xidheen dhamaan marsooyinka badda marka laga reebo dekeda Berbera oo ay iyadana kasoo dagi karaan waxyaabaha daruuriga ah.
Dhinaca kale, waxay xuseen in cid kasta oo garoonka diyaaradaha kasoo dagta laga bilaabo 25-ka March muddo 14 maalmood ah meel gaar ah lagu hayn doono (Karantiil)
Geesta kale guddidani waxay ku wargaliyeen masuuliyiinta wasaaraddaha iyo kuwa madaxabanaanba in shaqaalaha ay ka maarmi karaan ay faraan inay guryaha kasoo shaqeeyaan, marka laga reebo hayado gaar ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha Maaliyada, caafimaadka, warfaafina iyo kuwo kale oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeisa uu ka mid yahay.
Ugu danbayntii guudidan ay Somaliland u xilsaartay xanuunkan Coronavirus ayaa sheegay in go’aanadan ay soo saareen cidii ka dhago adaygta fulintooda talaabo sharci ah laga qaadi doono.
Guddidan oo ka kooban xubno wasiiro ah ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dhawaan u magacaabay inay ka shaqeeyaan hawlahan u diyaargarowga iyo ka hortaga xanuunkan Coronavirus ee dunida faraha baas ku haya.